Yakakwira Mhando Yakakwira Inooneka 360 Degree Yakadzikama Reflective Girazi Road Road vagadziri uye vanotengesa | Wistron
Yakakwirira Inoonekwa 360 Dhijitari Yakadzora Inoratidzira Girazi Road Road
Ruvara: Ruvara rwese runotarisika
Kurema: 500 ± 20g
Kurema Unyanzvi: Matani makumi mana pamusoro
Natsiridza kuratidzwa kwemigwagwa yekumaka mumigwagwa panguva yekunaya kwehusiku sezvo tambo diki dzegirazi mu thermoplastic dzisiri kuratidza mumvura inonaya.
Kutungamira traffic mumigwagwa mikuru kana yekumonyoroka makombama husiku kuwedzera kumigwagwa yekumaka migwagwa, uye nekupa yakachengeteka nharaunda yekuona. Magirazi madiki egirazi mu thermoplastic anodonha nyore; nekudaro kuratidzwa kwemigwagwa yekumaka migwagwa kunodzikira zvakanyanya. Kubhowa chiito kunozivisa vatyairi kana vachinja nzira
Solid magirazi emigwagwa mashopu anoshanda ne retro kuratidzira. Iyo inopinda mwenje inodzoserwa kumashure ne retro reflector munzira chaiyo imwechete kubva kwayakauya, yemadhigirii makumi matatu. Izvi zvakakosha mumigwagwa, sezvo chiratidziro chinoratidza mwenje wemotokari kubva kukona yega yega kudzoka kune vashandisi vemugwagwa, iyo inovatungamira kana kuvhundutsa mune dzakasiyana traffic mamiriro.
Chigadzirwa Dzinopfavisa Girazi Road Stud
Mashoko Yekutanga Ruvara Hwakatsamwa girazi
Chitarisiko Round kana Flat pamusoro
Kurema 500 ± 20 g
Kurema kugona Matani makumi mana pamusoro
Ruvara Ruvara rwese runotarisika
Kavha Dzaizara ari atorwa chokutanga, uye 24pcs / ctn
Solid magirazi emigwagwa akakodzerwa nemadhorobha pamwe nekumaruwa. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mukati meiyo nharaunda yezvivakwa, asi iwo zvakare akakodzera kwazvo ekuvaka kana ekushongedza mafomu. Zviripachena, zvese zvinangwa zvinogona zvakare kuwanikwa mune imwechete application.
Solid magirazi emigwagwa akaiswa mukati memugwagwa pamusoro pehungwaru, yambiro uye traffic kudzora. Ivo havasi ivo chete vanooneka zvakajeka mukuvira uye murima, asi zvakare vanoona zviri nani kutaridzika kwemushandisi wemugwagwa mukati mezuva. Kunyanya nehuremu hweshure kubva kuzuva uye / kana kunonaya mvura, magirazi akasimba emigwagwa anowoneka kupfuura kumaka mumugwagwa, uye izvi zvinowedzera kuchengetedzeka kwetraffic zvakanyanya. Mienzaniso yezvishandiso ndeye turbo kutenderera, ine ngozi ma curves, driveways kana migwagwa mikuru, nzvimbo dzeveruzhinji uye nzvimbo dzekupaka. Ona iyo mifananidzo pazasi kuti uone nezve mamwe mashandisiro.
1. Hapana bofu nzvimbo mune chero munyonga.
2.High degree rekumusoro kwekuomarara uye slip-proof pamusoro; chiratidziro chinogona kugara kwenguva refu kwazvo.
3.High simba uye refu mukurumari.
4.Chikamu chinobuda chiri 100% chinoratidza.
5.Smooth pamusoro uye isiri nyore kuunganidza guruva, iro risingade kuchenesa uye kugadzirisa.
6.Fully otomatiki kugadzirwa nemishini.
7.Hupenyu hwese hwakareba zvakapetwa ka15 kupfuura echinyakare epurasitiki pekisheni.
Makore masere nemakumi mashanu neshanu vimbiso inopihwa nzira dzepasirese pasirese (mwero wekutyora uri pasi pe5%).
Pashure: Aluminium Mugwagwa SD-RS-A3 (Aluminium Katsi Maziso \_ Aluminium Mugwagwa Maki)
Zvadaro: Plastic Mugwagwa Mudzidzi SD-RS-P2
Girazi Reflective Led Road Stud
Girazi Road Studs
Yakapusa Girazi Solar Road Stud